मोफसल यात्रामा ‘शत्रु गते’ टिम, चितवन आएर के भने कलाकारले ? – Hamrofm
Home / Entertainment / मोफसल यात्रामा ‘शत्रु गते’ टिम, चितवन आएर के भने कलाकारले ?
मोफसल यात्रामा ‘शत्रु गते’ टिम, चितवन आएर के भने कलाकारले ?
Editor Hamrofm March 8, 2018	Entertainment, Local, Showtime Leaveacomment 28 Views
चितवन,फागुन २४- चैत ९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘शत्रु गते’ टिम यति बेला आफ्नो प्रचारप्रसारको क्रममा रहेको छ । चलचित्रको गीत संगीत र ट्रेलरले दर्शक माझ आफ्नो राम्रो छाप प्रस्तुत गरिसकेको छ । मोफसलका दर्शक तथा संचारकर्मीसंग भेटघाट गर्ने उद्देश्यले यस फिल्मले मोफसल टुर गरिरहेको निर्माण युनिटले जानकारी दिएको छ । यस टुरलाई रुस्लान भोड्काले सहयोग गरेको छ । ’रुस्लान मह शत्रु गते यात्रा २०७४’ नाम दिइएको यस यात्रामा कलाकार हरिवंश आचार्य, किरण केसी, शिवहरि पौडेल,दिपाश्री निरौला, पल शाह, आँचल शर्मा लगाएतको सहभागीता रहेको छ । टुरमा फिल्मको टिमले स्थानीय दर्शकलाई विभिन्न प्रस्तुति समेत पस्किनेछन्। २३ गते अर्थात हिजो (वुधवार) हेटौडाबाट सुरु भएको टुर आज (विहिवार) चितवन आइपुगेको छ । चलचित्र निर्माण युनिटले आज नारायणगढमा पत्रकार सम्मेलन समेत गरेको छ ।
चलचित्र शत्रुगते बाट हास्य कलाकार महजोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको एघार वर्षपछि फिल्म निर्माणमा पुनरागमन समेत भएको छ । एघार वर्षअघि महको ब्यानर महसञ्चारबाट फिल्म ‘जे भो राम्रै भो’ बनाएर एकाएक फिल्म निर्माणबाट हराएको यो जोडीले नयाँ फिल्म ‘शत्रु गते’ निर्माण गरेको हो । चलचित्र शत्रु गतेका निर्माता एवम् कलाकार हरिवंश आचार्यले राष्ट्रियता भित्रको मौलिक चलचित्र निर्माण गरिएको बताए । उनले चलचित्र राम्रो बनेको भन्दै आम दर्शकलाई जानकारी दिन पचारप्रसारमा आएको बताए ।अभिनेत्री दिपाश्री निरौलाले काठमाडौ पछिको ठुलो चलचित्र बजार चितवन रहेका भन्दै पुराना चलचित्रहरु बाट भन्दा शत्रु गते बाट बढी माया पाउने दावी गरिन् ।
फिल्मकी अभिनेत्री आँचल शर्माले सानैदेखि टेलिभिजनमा मदनकृष्ण र हरिवंशको कमेडी हेरेर हुर्किएको भन्दै उहाँहरुसंगै फिल्ममा काम गर्न पाउँदा गौरव लागेको बताइन् । अभिनेता पल शाहले पनि दिग्गज कलाकारको समूहमा आबद्ध भएर फिल्ममा अभिनय गर्न पाउनु खुसीको कुरा भएको बताए । चलचित्रको प्रचार सामाग्रीले दर्शकबाट राम्रो प्रतिक्रिया बटुलीरहेको र अझ थप त्यसमा दर्शकको चासो बढोस् भन्ने हेतुले पनि मोफसल यात्रा गरिएको चलचित्रका प्रस्तुतकर्ता किरण केसीले बताए ।
२४ गते (विहिवार) नारायणगढ आइपुगेको टिम २५ गते बुटवल, २६ गते पोखरा, २८ गते बिर्तामोड, २९ गते दमक र ३० गते इटहरी पुग्नेछ । ’मह संचार’को व्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई प्रदीप भट्टराईले निर्देशन गरेका छन् । किरण केसी प्रस्तुतकर्ता रहेको यस फिल्ममा हरिवंश आचार्यको कथा, निर्देशक भट्टराई र दीपकराज गिरीको पटकथा, निर्देशक भट्टराई र हरिवंश आचार्यको संवाद रहेको छ । यस फिल्ममा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, शिवहरि पौडेल, प्रियंका कार्की, राजाराम पौडेल, पल शाह, आँचल शर्मालगायतका कलाकारहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ । रमिला आचार्य, यशोदा सुवेदी, नरेन्द्र कंसाकार, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र शिवहरि पौडेल फिल्मका निर्माता हुन् । दीर्घ गुरुङले खिचेको फिल्मलाई मित्र डी गुरुङले सम्पादन गरेका छन् ।
Previous चितवनमा आजदेखी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको महिला क्रिकेट लिग सुरु, एपिएफ र राईजिङ विजयी
Next सजिलो लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा देवघाटमा